D Federalka iyo QM oo ka heshiiyey khilaafkii erigii Haysom | Goojacade
Home War D Federalka iyo QM oo ka heshiiyey khilaafkii erigii Haysom
D Federalka iyo QM oo ka heshiiyey khilaafkii erigii Haysom
Madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Kheyre, ayaa maanta Muqdisho kula kulmay madaxa waaxda siyaasadda iyo dhismaha nabadda qaramada midoobay (DPPA), Rosemary DiCarlo.
Kulankan ayaa yimid ku dhowaad laba bilood kadib markii Soomaaliya ay cayrisay wakiilkii QM ee Soomaaliya, Nicholas Haysom.
Labada dhinaca ayaa ku heshiiyey in QM ay dawladda kala shaqayso ka guul gaaridda hadafyada waawayn ee dowladda oo ay kamid yihiin kobcinta dhaqaalaha, cafinta daynta, ka shaqaynta siyaasadda loo dhanyahay, dagaalka dhanka ah musuq-maasuqa, dardar-gelinta amniga iyo sidii dadka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen waxbarasho iyo caafimaad.
QM iyo Soomaaliya ayaa isku raacay in dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay qaataan dawrka hoggaamineed iyo jaangoynta qaybaha muuhiimka ah ee dawladda laga caawinayo iyo in Qaramada Midoobay ay ku taageerto in lagu fuliyo xilliyada lagu tala galay in lagu dhaqan-geliyo.
Rosemary DiCarlo ayaa ammaantay ajandaha dib-u-qaabaynta dawladda, waxa ayna ballan qaaday in qaramada midoobay ay taageero xooggan ku bixinayso dhaqan gelinta halbeegyada Tubaha siyaasadda loo dhanyahay, amniga iyo cadaaladda, horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada.
Previous articleXildhibaan Reer Laascaanood: Faysal C W berigii hore Basaas buu ahaa hadana waa fadlan lacag ku shubo
Next articleUK oo safiir cusub u soo magacowday Soomaaliya